सरकारले दिए नसोचेको खुसीको खबर! अब हरेक घर घरमा आउनेछ खुसीको बहार… अवस्य पढ्नुहोस् – PathivaraOnline
Home > समाचार > सरकारले दिए नसोचेको खुसीको खबर! अब हरेक घर घरमा आउनेछ खुसीको बहार… अवस्य पढ्नुहोस्
सरकारले दिए नसोचेको खुसीको खबर! अब हरेक घर घरमा आउनेछ खुसीको बहार… अवस्य पढ्नुहोस्
admin November 22, 2020 समाचार	0
काठमाडौ । देशभरबाट छ लाख ८१ हजार युवा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार असोजदेखि मङ्सिर ४ सम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध हुनका लागि त्यो सङ्ख्याका बेरोजगार युवाले आवेदन दिएका हुन् । यसमा आउँदो १५ गतेसम्म अझै बढी बेरोजगारको सङ्ख्या थपिने छ । समाचार आजका अनलाइनहरूमा छापिएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रममार्फत चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा दुई लाख विपन्न बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ तर रोजगारीका लागि आवेदन दिने बेरोजगारको सङ्ख्या भने अत्यधिक छ । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारी तथा देशभित्रै पनि हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकले रोजगारी गुमाएका कारण बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । देशभित्र कति युवाले रोजगारी गुमाए भन्ने तथ्याङ्क छैन ।
श्रम मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटिएका रोजगार संयोजकबाट सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार यो सङ्ख्या बेरोजगार युवाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका आधारमा सूचीकृत गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै बेरोजगार युवालाई आ–आफ्नो पालिकामा गत भदौ ७ सम्म आवेदन दिने समय तोकेको थियो ।
पालिकामा आएका बेरोजगारका आवेदन छनोट गरी रोजगार संयोजकसमक्ष पठाएपछि संयोजकले बेरोजगारीको सूचीमा सूचीकृत गर्छन् । योे सङ्ख्या बेरोजगारको सूचीकृतको सूची हो । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय संयोजक सुमन घिमिरेले मन्त्रालयले देशका ७५३ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत बेरोजगारीको नाम सङ्कलन गरेर छनोट गरेको जानकारी दिए ।
उनले उक्त रोजगार कार्यक्रमले अति विपन्न परिवारलाई समेटेर बेरोजगार युवालाई रोजगारीसँगै देशभित्र काम गर्नुपर्छ भने सीप सिकाउने कामसमेत भइरहेको जानकारी दिए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
नेपालमा बल्ल सरकारले ल्यायो कडा कानुन, करणी गर्नेलाई मात्रै होइन, घटना मिलाउनेलाई समेत यस्तो छ जेल सजायँ!
सेल्फी लिने क्रममा एक युवकको एक सेकेण्डमै गयो ज्यान , क्यामरामा रेकर्ड भयो सबै दृश्य , भिडियो बन्यो भाइरल
प्रधानमन्त्री ओलीले गरे यस्तो संकल्प! “गुमेक‍‍ो भूमी फिर्ता गरेर मात्र राजीनामा दिन्छु”